ता’लिवानले घर-घर गएर मानिसको खोजी गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दावी ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ४, २०७८ शुक्रबार 260
एजेन्सी : संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिवानले राष्ट्रसँग काम गरेका व्यक्तिहरुको खोजी गरिरहेको दावी गरेको छ । राष्ट्र संघको एक रिपोर्टमा अनुसार तालिवानी लडाकुहरुले घर घर गएर नेटोसँग काम गरेका व्यक्तिहरुलाई खोजिरहेको र परिवारका
सदस्यहरुलाई धम्की दिइरहेको छ। ता’लिवानले भने आफूले सबैलाई माफी दिएको र बदला लिनका लागि कसैलाई पनि अ’पहरण गर्ने, बन्धक बनाउने वा हत्या गर्ने काम नगर्ने जनाएको थियो । तालिवानले अफगानिस्तानमा छिट्टै सरकार बनाउने भन्दै आफूलाई देश भित्र वा बाहिर कुनै दुश्मन नचाहेको समेत बताएका थिए।
लिवानले नेटोसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई खोजिरहेको नर्वेनियन सेन्टर अफ ग्लोबल एनालाइसिसले जनाएको हो। उक्त संस्थाले संयुक्त राष्ट्र संघलाई ुइन्टेलिजेन्सु रिपोर्ट दिने गर्छ।
उक्त संस्थाले तालिवानले ‘टार्गेट’मा राखेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेसक्ने, हत्या गर्नसक्ने, परिवारका सदस्यालाई सजाय दिन सक्ने सम्भावना रहेको समेत जनाएको छ। तालिवानको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा रहेकाहरुको सामुहिक नरसंहार हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
ता’लिवानले सत्ता क’ब्जा गरेपछि काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर देश छाड्न चाहनेको भिड लागेको छ। दैनिक रुपमा सयौं व्यक्ति विमानस्थल पुगिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत र नेटो राष्ट्रका सदस्यहरुको आफ्नो दूतावासका कर्मचारी, नागरिक र सँगै काम गर्नेहरुलाई काबुलबाट फिर्ता लग्ने प्रयास गरिरहेको छ।
Prevप्रदेश २ मा एमाले भन्दा एमाले समाजवादी बलियो !
Nextमहन्थले पनि परिवर्तन गरे पार्टीको नाम, नयाँ नाम :-‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी’